रुपैयाँ एक सय - विकिपिडिया
रूपैयाँ एक सय
मोरू एक सय
सेप्टेम्बर २००८ – वर्तमान
सगरमाथा, न्यातपोल मन्दिर
नेपाली १०० रूपैयाँ को नोट (रू १००) नेपाली रूपैयाँको एक सामान्य मूल्यवर्ग हो । रू १०० को नोट सर्वप्रथम पहिलो पटक सदर मुलुकीखानाद्वारा सन् १९४५ मा जारी गरिएको थियो । पहिलो जारी नोटमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहको चित्रलाई आवरणमा छापिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक सन् १९६० मा रू १०० को नोट जारी गरेको थियो । वर्तमानमा उपलब्ध तथा चलनचल्तीमा रहेको रूपैयाँ एक सयको नोट सन् २००८ मा जारी गरिएको हो । यो नोट वर्तमान समयमा प्रचलनमा रहेको छ ।
१ नोट इतिहास
३ नोट विशेषताहरू
६ बाह्य सुत्रहरू
नोट इतिहास[सम्पादन गर्ने]
रूपैयाँ सयको नोट सर्वप्रथम वि.स. २००२ सालबाट निस्कासन हुन सुरू भएको थियो । त्यतिबेला रूपैयाँलाई मोरू भन्ने चलन अनुसार तत्काल १०० को नोटलाई मोरू एक सय भनिने गरिन्थ्यो । यो नोट राजा त्रिभुवनका पालामा निस्कासन भएको थियो । यतिबेलाको नोट हालको रूपैयाँ १०० को नोटका तुलनामा लम्बाइमा कम र चौडाइमा बढी नाप भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा ठूलो दरको नोट मोरू एक सयको नै रहेको थियो । सबैभन्दा पहिलो संस्करणको मोरू एक सयको नोटमा गभर्नर जनक राज पण्डितको हस्ताक्षर रहेको थियो । उक्त संस्करण सन् १९४५ सेप्टेम्बर १७ मा जम्मा ४०,००० नोटहरू निस्कासन भएको थियो ।
नेपाली एक सय रूपैयाँमा हस्ताक्षर रहेका गभर्नरहरूको सुची
संस्करण नमुना तस्बिर
180px जनक राज पण्डित सन् १९४५ सेप्टेम्बर १७ पहिलो मोरू
अगाडि:दायाँमा राजा त्रिभुवनको तस्बिर
पछाडि:जङ्गलमा एक जंगली गैडा सन् १९४५-सन् १९५६
भरत राज पण्डित सन् १९४८
नरेन्द्र राज पण्डित सन् १९५३ डिसेम्बर
नोट विशेषताहरू[सम्पादन गर्ने]
हाल रूपैयाँ एक सयको नोटमा रह्का केही विशेषताहरू:
नोटको बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र रहेको छ ।
नोटको मध्यभागको पृष्ठभमिमा नेपालको नक्सा रहेको छ ।
नोटको मध्य भाग नीर अशोक स्तम्भको चित्रका साथै लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध ।
अशोक स्तम्भको चित्रसँगै दृष्टीविहिनहरूलाई नोट पहिचानका लागि छामेर थापा पाउने कालो थोप्ला समेत रहेको छ ।
अशोकस्तम्भको बायाँतर्फ अण्डाकारभित्र सिल्भर मेटालिकमा मायादेवीको चित्र रहेको छ ।
दायाँतर्फ लालिगुराँसको अर्धदृश्य रूपमा पानीछाप रहेको छ ।
यस नोटलाई सिधा हेर्दा रातो रंग, ढल्काएर हेर्दा हरियो रंग देखिने छ ।
नोटको पछिल्लो भागेको मध्यभागमा एकसिंगे माउ गैँडा र बच्चाको चित्र रहेको छ ।
एकसिंगे गैंडा २ वटा
न्यातपोल मन्दिर, अशोक स्तम्भ
↑ Top5facts you might not know about Nepali currency
↑ Amazing facts of Nepali Currency you may not know
↑ सय रुपैयाँको नोटमा ‘लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध’
↑ Nepalese Notes Among World’ s Most Beautiful ; Represent Animals & Stand Out In Colors Combination & Simplicity
phpbanknotenews.com मा नेपाली नोटहरूको पृष्ठ
हाल प्रचलनमा रहेका
रुपैयाँ पाच सय
रुपैयाँ एक हजार
हाल प्रचलनमा नरहेका
रुपैयाँ दुई सय पचास
रु. ५ सिक्का
रु. १० सिक्का
रु. २५० सिक्का
रु. ५०० सिक्का
रु. १००० सिक्का
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=रुपैयाँ_एक_सय&oldid=904340" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:०५, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।